प्रधानमन्त्रीले हतारमा निर्णय लिनबाट जोगिनुपर्छ, विशेषगरी त्यस्तो निर्णय जसको प्रमुख उद्देश्य नाटकीय प्रभाव पार्नु होओस् । यसको सट्टा अर्थशास्त्र, विज्ञान र जनस्वास्थ्यका विशेषज्ञको सल्लाहमाथि भरोषा गर्नुपर्छ
रामचन्द्र गुहा शनिबार, जेठ १७, २०७७
शासकहरुले बहुमतको बलमा लामो समय सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने सोच आजैबाट त्यागिदिए हुन्छ। किनकि समाज निराश र चिन्तित छ, जुनसुकै बेला जस्तोसुकै निर्णय दिन पनि सक्छ। समय छँदै सचेत बनौं।
मुमाराम खनाल विहीबार, जेठ १५, २०७७
हामी सामाजिक रुपान्तरणका लागि, जनहितका लागि र सत्य स्थापित गर्नका लागि यो होडबाजीभन्दा पर थुप्रै नभनिएका कथा भन्ने प्रयत्न गर्नेछौं।
सञ्जीव शर्मा विहीबार, जेठ १५, २०७७
असहज परिस्थितिका माझ पनि चुनौतीहरुलाई पन्छाउँदै मिडियामार्फत पाठकलाई सुसूचित गराउने काममा हामी निरन्तर लागिरहने छौं। हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि रचनात्मक रुपमा अघि बढिरहनेछौं।
नेपाल समय विहीबार, जेठ १५, २०७७
धर्मेन्द्र झा बुधबार, जेठ १४, २०७७
राज्यस्रोतको दोहन र श्रमिकको रगतपसिनाबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्ने ‘आधुनिक विकास नामक’ झुठो सपनाको झलक मात्र देखाउँछन्। नीति र कार्यक्रमका रेल, पानीजहाज, आधुनिक कृषि, स्मार्ट सहर, हाइवे, हाइटेकजस्ता शब्दजाल लाग्छन्।
डा.कृष्णप्रसाद पौडेल विहीबार, जेठ ८, २०७७
विनोद चौधरी सोमबार, वैशाख २९, २०७७
क्षेत्रीय पहिचानको बलमा मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा टिक्न नसकिने भएपछि मधेश केन्द्रित दलहरु जातीय पहिचानवादी शक्तिसँग मिलेर पहाड र हिमालतिर पनि उक्लने रणनीतिमा छन्।
मुमाराम खनाल शुक्रबार, वैशाख २६, २०७७
कोभिड–१९ महामारीका राप र तापबाट हामी सबै आक्रान्त छौं। विश्व समुदाय नै यसको सन्त्रासमा छ। लाखौं मानिस यसबाट संक्रमित छन्।
देवी सुनुवार आइतबार, वैशाख २१, २०७७
श्रमिक दिवसका अवसरमा शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको झन्डै १७ मिनेट लामो सन्देशमा श्रमिकलाई कुनै राहत दिने शब्दावली सुनिएन।
रविन्द्र सुवेदी शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७
पैताला फुटाउँदै सयौं किलोमिटर हिँडिरहेका नागरिकमा संक्रमणको त्रासभन्दा भविष्यको चिन्ता बढी छ। उनीहरुसामु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ, अब के गरेर बाँच्ने?
सञ्जीव शर्मा शनिबार, वैशाख ६, २०७७
दलहरुले समाजवादको पक्षमा सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि व्यवहारमा जनस्वास्थ्यप्रतिको सरोकार बजारलाई सुम्पिदिएका छन्। र, खुला बजारका व्यापारीमार्फत कमिसन खाएका छन् वा आफैं पनि उक्त नाफाको व्यापारमा संलग्न छन्।
मुमाराम खनाल विहीबार, वैशाख ४, २०७७
‘समाज र अर्थतन्त्र पुनर्संरचना हुँदै छ’
विश्वका राष्ट्रको शक्ति सन्तुलन र व्यापारमा पनि यसले फेरबदल ल्याउने सम्भावना छ। व्यक्तिलाई आध्यात्मिक चेत र परिवारको महत्त्व पनि बुझाइदिएको छ।
नेपाल समय बुधबार, वैशाख ३, २०७७
एकातिर, बिदेसिएका नेपाली घर फर्किंदा गुम्ने रेमिटान्स र अर्कोतिर कोरोनाले नित्याएको आर्थिक संकटको दोहोरो मारमा नेपाल पर्नेछ। आगामी दिनमा सरकारको नीतिगत प्राथमिकताको ‘डिपार्चर’ले मात्र संकट सम्बोधन गर्न सक्नेछ।
कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएपछि सरकारले गरेको दुईवटा काम मात्रै छन्– एउटा चीनबाट विद्यार्थी ल्याउने र अर्को लकडाउनको घोषणा। के यिनै दुई कामका लागि मात्र हो सरकार?
शान्तिकृष्ण अधिकारी सोमबार, चैत २४, २०७६
महामारीको दुःखद घडीलाई नाफामा रुपान्तर गर्न विभागीय मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसमेत मुछिए। स्वाभाविकै हाे, मानसिकता गरिब भएपछि धनले पनि धनी बनाउँदैन- राज्यको खर्बौं सम्पत्ति जिम्मा लिएको दलले केही लाखका लागि महामारीलाई उपयोग गर्‍यो।
मुमाराम खनाल विहीबार, चैत २०, २०७६
नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि सरकारको यो कदममा हामी सबैले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। तर, सरकार पनि धेरै ठाउँमा चुकेको छ।
चरण प्रसाई विहीबार, चैत १३, २०७६
अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित राष्ट्रमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको महामारीले त्यहाँको लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र राज्यको निर्णय क्षमताप्रति संशय उत्पन्न गरेको छ।
मुमाराम खनाल शुक्रबार, चैत ७, २०७६
महेश्वर आचार्य विहीबार, चैत ६, २०७६
कोभिड- १९ को महामारी विश्वव्यापी भएका बेेला पनि सरकारले एसईई गराई छाड्ने भयो। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी र अभिभावक आफैंले सचेतता अपनाउनुको विकल्प छैन।
नेपाल समय बुधबार, चैत ५, २०७६
राज्य दोहन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै पार्टी सदस्यसम्मका लागि मुख्य आकर्षण बन्नु नेपाली राजनीतिको प्रमुख दुःख हो।
मुमाराम खनाल विहीबार, फागुन २२, २०७६
‘भिटेनलाई गीतमा अपशब्द प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्रेको थियोे, गोकुल बाँस्कोटाले त्यस्तै शब्द कर्मचारीलाई प्रयोग गरे’, उनीचाहिँ थुनिनु नपर्ने?’
शान्तिकृष्ण अधिकारी बुधबार, फागुन १४, २०७६
एकदिन म गाडी चलाइरहेको थिएँ, सुशील दाइ अघिल्लो सिटमा बस्नुभएको थियो। कुरैकुरामा मैले ‘आज मिष्ठान्न भोजन गराउने पालो उपसभापतिज्यूको’ भनें। कुरा सुनेर उहाँको मुख रातो भयो।
लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे आइतबार, माघ २६, २०७६
अब्दुल हफिज गान्धी आइतबार, माघ १९, २०७६
सबैजसो नेपाली कर तिर्न बाध्य छन्। कर तिर्ने नागरिकले राज्यबाट के सुविधा पाउँछन् त?
शान्तिकृष्ण अधिकारी शुक्रबार, माघ १७, २०७६
विधेयककाे दफा ११५ अनुसार यो ‘कंगारु कोर्ट’लाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गठन गर्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतको गठन सरकारको आदेशबाट हुँदैन। त्यसमा पनि जन्मकैदसम्मको सजाय दिनसक्ने अधिकार भएको अदालत सरकारले गठन गर्ने काम कतै हुँदैन।
भीमार्जुन आचार्य शनिबार, पुस २६, २०७६
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा नेपाली समाज खुला छ। यो हाम्रो ठूलो पूँजी हो।
कनकमणि दीक्षित शुक्रबार, पुस २५, २०७६
निजी स्वार्थका लागि दल परिवर्तन गर्दै आएकाले कहिल्यै पनि पार्टीको भलो गर्दैनन्। सच्चा कार्यकर्ता नेताहरुको दैलो धाउँदैन, नेताले नै खोज्न सक्नुपर्छ।
शान्तिकृष्ण अधिकारी विहीबार, पुस १०, २०७६
एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वन्तत्रतामाथि धावा बोलेको छैन। यो त एक स्वतन्त्र राज्यले अर्को स्वतन्त्र राज्यलाई सहयोग गर्ने मनसायले आएको कार्यक्रम हो।
खड्गबहादुर विष्ट, कार्यकारी निर्देशक (एमसीए नेपाल) मंगलबार, पुस ८, २०७६
शीर्ष नेता पाँच–सात जना बस्छन्, लेनदेन गर्छन् । दलीय व्यवस्था यसरी नै चलिरहेको छ, लोकतन्त्र यसरी नै चलिरहेको छ।
डा. देवेन्द्रराज पाण्डे शुक्रबार, पुस ४, २०७६
‘राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन’ अन्तर्गत नेकपाका शीर्ष नेताहरूले निकालेको निष्कर्ष आफैंमा उदेकलाग्दो छ।
मुमाराम खनाल विहीबार, पुस ३, २०७६
धर्मेन्द्र झा बुधबार, मंसिर २५, २०७६
पी साइनाथ विहीबार, मंसिर १९, २०७६
डा. पीताम्बर शर्मा विहीबार, मंसिर १२, २०७६
राजमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले यात्रुलाई महँगोमा गुणस्तरहीन खाना खुवाउँछन् भने त्यही यात्रुवाहक गाडीका चालक (गुरुजी) लाई निःशुल्कमा तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट खाना खुवाउने गरेका छन्।
धर्मेन्द्र झा बुधबार, मंसिर ११, २०७६
मिडिया कानुन, सुरक्षा विधेयक, गुठी विधेयक आदि सबैमा गर्न खोजिएको परिवर्तन सरकारको निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्ने प्रयास हुन्।
शान्तिकृष्ण अधिकारी शुक्रबार, मंसिर ६, २०७६
ईश्वर देवकोटा विहीबार, मंसिर ५, २०७६
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष : न्याय झन् झन् टाढा
आयोग राजनीतिक पहुँचका मानिसको भत्ता खाने थलो बन्यो। सुरुमा आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल २ वर्षको थियो। अहिले थपेर ४ वर्ष बनाइएको छ। यति बेला आयोग अस्तित्वमा छ, पदाधिकारी छैनन्।
सुमन अधिकारी विहीबार, मंसिर ५, २०७६
नेपालले आफ्ना पछिल्ला नक्सामा लिपुलेक लगायतका स्थानलाई स्पष्ट समावेश गरेको छैन। त्यती मात्र किन, लामो समयदेखि नेपालले आधिकारिक धारणासहितको नक्सा नै सार्वजनिक गरेको छैन।
धर्मेन्द्र झा बुधबार, कात्तिक २७, २०७६
विद्यानाथ कोइराला बुधबार, कात्तिक २०, २०७६
रेलमार्गबिना सडकको बाटोबाट मात्रै चीनसँग गरिएको पारवहन सुविधाको सम्झौताबाट नेपालले पूर्णरूपमा फाइदा लिन असम्भव छ। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको सुनिश्चितता बिना सिगात्से-केरुङनाका रेलमार्ग चिनियाँ पक्षको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ।
सूर्यराज आचार्य २०७६-०६-२५ १५:४४:१८
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्छन्। स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनताको राज्यप्रति भरोषा र विश्वास त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ ।
धर्मेन्द्र झा शुक्रबार, कात्तिक १५, २०७६
गोयबल्सको प्रचारजस्तो समृद्धिको भाषण
शान्तिकृष्ण अधिकारी २०७६-०७-८ १४:४७:५२
नेपाल समय २०७६-०६-३० १२:२५:३७
नेपाल समय २०७६-०६-२५ १५:४१:३९
नेपाल समय २०७६-०६-२३ १६:४३:४२
नेपाल समय २०७६-०६-१३ ११:०२:४८
सरकारले उर्दी जारी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
नेपाल समय २०७६-०६-३ १२:४३:२४
नेपाल समय २०७६-०६-३ ०९:०१:१८
नेपाल समय २०७६-०५-२६ १०:१९:११